Gabadh Kenyan ah oo caanku ah oradka ayaa jirkeeda laga helay dawo la mamnuucay - BBC Somali
Image caption Jemima Sumgong
Gabadhii ku guulaysatay Oradkii Olambika iyo maaratoonkii London, Jemima Sumgong ayaa noqotay ciyaartoydii u dambaysay ee Kenyan ah ee jirkeeda laga helo dawo awoodda jirka kordhisa oo mamnuuc ah.
Gabadhan oo 32 jir ah ayaa laga helay jirkeeda dawada la ciyaartoyda mamnuuca ka ah ee loo yaqaanno EPO.
Dawadaas waxaa jirkeeda laga helay iyadoo tartan orad ku jirta iyo iyada oo aan ordaynin, baaritaankaasna waxaa sameeyay hay'adda maamusha ciyaaraha fudud ee IAAF.
Sumgong ayaa ah ciyaartooygii u horeeyay ee Kenyan ah ee billadda dahabka ah ka soo hoyisa Olambika, waxayna difaacan lahayd 12 Abriil.
Sanadkii hore ayaa lagu dhawaaqay in Kenya in ay meel uga dhacday shuruucda dawooyinka awoodda jirka kordhiya ee mamnuuca ah, ciyaaryahannadoodana ka qaybgalay tartamadii magaalada Rio ka dhacay 2016kiina waxaa la mariyay baaritaan gaar ah.
Madaxa Olimbikada Kenya oo lagu eedeeyay xatooyo
Hay'adda ka hortagta dawooyinka awoodda jirka kordhiya ee mamnuuca ka ah ciyaartoyda ayaa sanadkii hore Kenya ku xukuntay in aysan waafaqsanayn xeerka u yaala, laakiin waxaa xayiraaddii laga qaadayka hor ciyaarihii xagaagii hore.
Intii u dhaxaysay 2011kii ilaa 2016kii in kabadan 40 ciyaartoy oo Kenyan ah ayaa jirkooda laga helay waxyaabo mamnuuc ah.